TOKKO MILIYOONAA KA DALDALU -
TOKKO MILIYOONAA KA DALDALU
Tokko waan nyaatu dhabeetii qooqa kan bulu
Waan kana maaf hin furre namni dhimmi laalu!
Dhugaa kun waan hin jaalatamnee
Waan kana osoo fooyyessinee
Daldala sirriif osoo diriirsuu nuu dhufee
Hannaan duroomuunis osoo illee hafee
Daldallalle jennaan dureessi karaa cufee!
Waa meeqa qabatee hiyyeessa gad dhayaa
Didee kunoo hundaa borcaa waliin dhayaa
Waa meeqas qabatee kaanii kaan haasayaa
Osoo gaarii hujee maaluma mee tayaa?
Gariin hin arguu maal osoo hubatee
Beekaa ka jiraatus jira hiyyeessa cuffatee
Jiruu hiyyeessaa mee ilaalaa
Dhugaan itti kennaa falaa
Dureessi didee ofuma tajaajilaa
Dureessi ammallee ammalee bololaa
Akki dureessi ta’u hiyyeessaa maalalaa
An homaa hin sobnee isinuu ilaalaa!!
Dureessi wal guuree walguuree
Hiyyeessallee itti cufe xurree
Hiyyeessis kanumaaf dureessatti xuure!
Dureessi nyaate banjii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Previous OROMO PROTESTS: WHY ETHIOPIA’S LARGEST ETHNIC GROUP IS DEMONSTRATING
Next ‪#‎OromoProtests‬ such rampant abuse has become common place across Oromia.